Usoro | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Kedu ihe bụ shọvel na nkedo, na otu esi eme ya n'onwe gị
Ọbụna mgbe oyi na-abịa, ọrụ na àgbà na n'ogige anaghị akwụsị. Mwepụ nke snow bụ usoro na-ewe oge, na-achọ ka ụgwọ mmadụ na-akwụ ụgwọ. Ma gịnị banyere ndị ahụ, n'ihi afọ ma ọ bụ ọrịa, agaghị enwe ike ịwụnye shọvel n'ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ? Otutu ndi oru ubi maara ihe ndi n'elebara ahuike ha anya ma ghara ichota otutu oge ma gbasi ike n'ile oru ugwo.
Ndị na-anụcha ihe nke oge a bụ ụzọ dị mma iji chekwaa oge na-eme ka ahụ dị mma maka ezinụlọ dum. Ezidri Snackmaker FD500 dryer bụ ezigbo nhọrọ nke ga-eju gị anya na atụmatụ ya. Nke a bụ nkịta zuru oke nke ahịa niile, na-emegharị maka nhọrọ nchịkọta dị iche iche.
Achịcha zuru ụwa ọnụ Ultra Ultra FD1000
Enwere okwu dị ebube - - "Kwadebe ụda ụkwụ n'oge okpomọkụ ...", nke pụtara na ịkwesịrị ịkwadebe maka oyi n'oge ọ bụla. Nke a gbasarakwa ị nweta ngwaahịa. Enweghị vitamin adịghị eche naanị ahụ nke onye ahụ n'oge oyi ga-eri akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi na herbs na ọdịnaya kachasị elu ha.
Esi mee ka mpeepe nkume maka poteto site na igwe ochie
Onye ọ bụla nwere ahụmahụ n'ubi na-ama ọkwa nkà na ụzụ nke hilling bushes. Iji kwado usoro a, ịnwere ike iji aka gị mee ihe na-esi n'ite ígwè. Ụkpụrụ nke ime ihe Otu esi belata ọrụ gị, dị mfe nghọta. Ụkpụrụ nke ime ụlọ maka nduku dị mfe.
Otu esi gbanye ahihia ahihia
E nwere ọnọdụ dị iche iche ebe ọnyà n'elu okpokoro okpomọkụ ma ọ bụ nyocha obodo nwere ike ịba uru: mmiri ozuzo agafewo, ahihia esiwokwa ike; enwere oke ahihia nke ndi omechapu ahihia; ịkwesịrị igbanye ahihia na ebe na-erughị ala maka ọkụ ọkụ ọkụ (ala na-adịghị ahụkebe, dị nso osisi ma ọ bụ osisi).